(L) ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသည့်အမှတ်တရများကိုပိတ်ဆို့ခြင်းသည်ပြန်လည်နာလန်ထူမှုကိုလျော့နည်းစေသည် (2013) - Your Brain On Porn
(L) boozy အမှတ်တရများ Blocking relapse (2013) ၏အန္တရာယ်ကိုလျော့နည်းစေ
Helen Shen ။ - ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၃ ရက်
အခြားစွဲလမ်းမှုပုံစံများကဲ့သို့ပင်အရက်သောက်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များ - ဘီယာအနံ့ကဲ့သို့သော - သည်အရက်ကိုစားသုံးရန်နှင့်အလွဲသုံးစားမှုများထပ်မံဖြစ်ပွားနိုင်သည့်အန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေနိုင်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှဤသင်ယူသောအသင်းအဖွဲ့များသည်ပြိုကွဲရန်ခက်ခဲနိုင်သည်။
ယခုအခါသိပ္ပံပညာရှင်များသည်ကြွက်များ၏ ဦး နှောက်အတွင်းရှိမော်လီကျူးရည်မှန်းချက်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကို (UCSF) မှအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင် Dorit Ron နှင့်သူမ၏အဖွဲ့သည် mTORC1 အချက်ပြလမ်းကြောင်းအားနည်းဗျူဟာအရပိတ်ဆို့ခြင်းသည်အတိတ်ကသောက်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအမှတ်တရများကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းဖြင့်အရက်ကိုပြန်လည်သောက်ခြင်းကိုလျော့နည်းစေသည်။ ဤလမ်းကြောင်းသည်သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဥာဏ်နှင့်ဆက်နွယ်သောပရိုတိန်းများစွာထုတ်လုပ်မှုကိုထိန်းချုပ်သည်။
Library archive မှထွက်လာသည့် folder တစ်ခုကဲ့သို့မှတ်ဉာဏ်သည်ပြန်လည်ရယူသောအခါအားနည်းချက်ရှိနိုင်သည်ဟုယူဆကြသည်။1။ ဖိုင်တွဲကိုရေရှည်သိုလှောင်မှုသို့မပို့မီစာမျက်နှာများကိုရှုပ်ထွေးနိုင်သည်သို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ လေ့လာမှုအတော်များများအရဤအချိန်ကာလအတွင်း၌ mTORC1 လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်ခြင်းသည်မှတ်ဥာဏ်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမတည်မငြိမ်ဖြစ်စေပြီးစိတ်ဒဏ်ရာလွန်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုတို့ကိုကုသရန်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်2, 3.
အတွက်ယနေ့ထုတ်ဝေနောက်ဆုံးပေါ်လေ့လာမှုမှာ။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ4ရက်သတ္တပတ် ၇ ပတ်ကြာအောင်ရေသို့မဟုတ်ရေရောနှောမှုနှင့် 20% အရက်တို့နှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက်ကြွက်များသည်ပြproblemနာတက်သောသောက်သူများဖြစ်လာခဲ့သည်။ Ron ကပြောကြားသည်မှာ concoction သည်ကြွက်များကိုကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်အရသာရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းနောက်ဆုံး၌တိရိစ္ဆာန်များသည်များသောအားဖြင့်၎င်းကိုသောက်ကြသည်။
“ တော်တော်အံ့သြစရာပဲ။ မင်းဘာမှမလုပ်ဘူး။ "အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသူတို့ကအရက်ကိုပိုကြိုက်နှစ်သက်လာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ " အရက်ကိုမူးယစ်ဆေးစွဲနေသည့်သတ္တဝါများသည် 80 မီလီဂရမ်ပမာဏ၏ပမာဏကိုရောက်ရှိခဲ့သည်မှာယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်ယူနိုက်တက်စတိတ်နှစ်ခုလုံးတွင်တရားဝင်မောင်းနှင်မှုဖြစ်သည်။
သုတေသီများသည်တိရစ္ဆာန်များမှအရက်ကို 10 ရက်အနည်းငယ်ကြာအောင်ဖယ်ထုတ်ပြီး၎င်းတို့တစ် ဦး ချင်းစီကိုအရက်နှင့်ဆက်စပ်သောအမှတ်တရများကိုပြန်လည်နိုးထစေရန်အရသာနှင့်အနံ့တို့အတွက်လုံလောက်ရုံမျှသာကျဆင်းသွားစေခဲ့သည်။ ထိုခဏချင်းတွင်ကြွက်အချို့သည် mTORC1 ၏လှုပ်ရှားမှုကိုတားဆီးသော rapamycin ဟုခေါ်သောဆေးကိုရရှိခဲ့သည်။
ကြွက်များအားလုံးသည်အရက်သောက်ရန်လီဗာကိုနှိပ်ရန်လေ့ကျင့်ခံခဲ့ရသော်လည်းမှတ်ဥာဏ်ပြန်လည်ရှင်သန်ပြီးနောက် rapamycin ကိုလက်ခံရရှိသူများသည်နှစ်ပတ်တာကာလအတွင်းယင်းသို့ပြုရန်စိတ်မ ၀ င်စားကြောင်းပြသခဲ့သည်။
UCSF အာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်တွဲဖက်စာရေးဆရာပက်ထရီရှာယာနာက“ ကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်လိုမှတ်ဉာဏ်နဲ့ဆက်သွယ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုအစပျိုးပေးတဲ့အချက်ကိုငါတို့သိတယ်။ ရနမ်သည်အဆိပ်နှင့်အရသာကိုအရက်သောက်ခြင်း၏ပျော်ရွှင်ဖွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ဆက်နွယ်သော Rapamycin ကြောင့်ပြတ်တောက်သွားသည့်မှတ်ဥာဏ်လမ်းကြောင်းသည်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုရွန်ကပြောကြားခဲ့သည်။
Philadelphia ရှိ Pennsylvania ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှစွဲလမ်းမှုလေ့လာရေးဌာန၏ဒါရိုက်တာ Charles O'Brien မှလေ့လာမှုကိုရည်ညွှန်းပြီး“ ဒါဟာတကယ့်ကိုကောင်းပါတယ်။ အခြေခံအားဖြင့်စွဲလမ်းမှုသည်မှတ်ဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး [စာရေးသူများ] သည် ဦး နှောက်ထဲတွင်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာများကိုမှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်နေကြသည်။
Rapamycin သည်မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်ပုံမရသော်လည်း၎င်းတို့ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းပြီးနောက်ရှိခဲ့သည့်မှတ်ဉာဏ်များ၏ပြန်လည်စုစည်းမှုကိုရေရှည်သိုလှောင်မှုသို့နှောင့်ယှက်သည်။ ပဏာမစမ်းသပ်မှုများအရမူးယစ်ဆေးဝါး၏သက်ရောက်မှုသည်အတော်အတန်တိကျနိုင်ပြီးတိရိစ္ဆာန်များသည်သကြား - ရေကဲ့သို့သောအခြားအရာ ၀ တ္ထုများ၏စားသုံးမှုကိုမထိခိုက်ပါ။
Ron ကသူမ၏အဖွဲ့သည်လူသားများတွင်လေ့လာမှုပြုလုပ်ရန်အစီအစဉ်မရှိကြောင်းပြောကြားသော်လည်းအခြားသူများမှသုတေသနပြုခြင်းက rapamycin (သို့) ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုအရက်အလွဲသုံးခြင်းအတွက်ထိရောက်သောကုသမှုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည် ယူအက်စ်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဌာနသည် rapamycin အားကိုယ်အင်္ဂါအစားထိုးကုသသူများအတွက် immunosuppressant အဖြစ်အတည်ပြုပြီးဖြစ်သည်။
O'Brien က“ လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိမရှိဆိုတာကိုချက်ချင်းသိအောင်လူနာတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်စမ်းချင်တယ်။
နှစ်: 10.1038 / nature.2013.13252
နာဒါ၊ K & Hardt, အို သဘာဝတရားဗျာ neuroscience ။ 10, 224-234 (2009).
Blundell, ဂျေ, Kouser, အမ် & Powell, CM ။ Neurobiol ။ လေ့လာပါ။ Mem ကို။ 90, 28-35 (2008).
ဝမ်, X တို့မှာ et al. ဂျေ neuroscience ။ 30, 12632-12641 (2010).
Barak, အက်စ် et al. သဘာဝတရား neuroscience ။ http://dx.doi.org/10.1038/nn.3439(2013) ။Show ကိုအခြေအနေတွင်